कुखुरापालनमा बीस अर्ब बाहिरिँदै | suryakhabar.com
Home कृषि कुखुरापालनमा बीस अर्ब बाहिरिँदै
on: २१ आश्विन २०७५, आईतवार १६:१६ In: कृषिTags: No Comments
चितवन । कुखुरापालन व्यवसायमा वार्षिक रु २० अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ । दानाको कच्चा पदार्थ, प्यारेन्ट चल्ला, औषधि, भिटामिन, उपकरणलगायत विदेशबाट आयात गर्नु परेका कारण सो रकम बाहिरिने गरेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं कृषि र वन समितिका संयोजक डा. तिलचन्द्र भट्टराईकाअनुसार दानाका कच्चा पदार्थमा मात्रै वार्षिक रु १६ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ । भटमास, मकै, हड्डीको धुलो, सूर्यमुखिको पिना, ढुटो, ढुटोको तेल निकालेपछिको पीना, क्याल्सियमलगायतका कच्चा पदार्थ भारत र अन्य देशबाट आयात गरिँदै आएको छ । असीदेखि ९० प्रतिशत भारतबाट तथा अरु तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ ।
“वार्षिक रु दुई अर्बभन्दा बढी औषधि र भ्याक्सिनका लागि तथा रु एक अर्ब उपकरण खरिद गर्न रकम विदेशिन्छ,” डा. भट्टराईले भने । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा ११ लाखभन्दा बढी ब्वायलर प्यारेन्ट चल्ला र एक लाख आठ हजार लेयर्स प्यारेन्ट चल्ला आयात गरिएको थियो । रु ६४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने गर्दछ । लेयर्स प्यारेण्टका लागि रु ८०० र ब्वायलरका लागि रु ५०० हाराहारी पर्छ । डलरको मूल्य र समयअनुसार मूल्य घटबड हुने गर्छ ।
नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेल नेपालमा भटमास र मकैको व्यावसायिक खेती गर्न सकेमा ७० प्रतिशत पोल्ट्रीको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउँछन् । प्यारेन्ट चल्ला उत्पादन क्षमता स्वदेशमा बढाउन सकेमा थप १० प्रतिशत व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले बीउ मात्रै दिएर होइन, अनुगमन सहित आवश्यक सहयोग किसानलाई गर्न सकेमा बाँझो खेतमा मकै र भटमास लगाएर कृषि क्षेत्रको व्यापार घाटामा कमी ल्याउन सकिने उनले बताए ।
२१ आश्विन २०७५, आईतवार १६:१६